May Nyane: မြေနဲ့အတူ(အပိုင်း-၃)
ဇာတ်လိုက်တွေကို မျက်စိထဲမှာလည်း မြင်ယောင်ကြည့်ရင်း ဖတ်ရင်း အရည်ပျော်ဆင်းရတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကို အရင်က မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ စောင့်နေမယ် နောက်တစ်ပိုင်းကို။
အရင်ကထဲက ဖတ်ဖူးပြီးသား၊ ကြိုက်လဲ အရမ်းကြိုက်တဲ့ ၀တ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ပါ...။
အခုလို ပြန်ဖတ်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူးအထူးပါ ဆရာမရေ...။
ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပဲ အမြဲ ညှိယူနေရတာနော် ဆရာမ။
တခါတလေကျတော့လဲ တကယ်ပဲ စိတ်မော တယ်။
I've read all. Very nice. I have no more blame on "May". Just lack of understanding. Please listen "Maung Gyi Khaw Yar" song. http://tw.youtube.com/watch?v=vuEuuD3m70o&feature=related